> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Camera Roll si Mac
Waxaad iPhone Camera Roll waxaa ka buuxda sawiro, si lacag la'aan ah ilaa meel ama edit ee photos on Mac, doonayaa si ay u gudbiyaan iPhone Camera Roll si Mac? Xaaladdan oo kale, si ay u hagaagsan iPhone Camera Roll si Mac si karti leh oo si deg deg ah, waxaan kuu soo jeedinaynaa in ay isku dayaan app iPhone ah - Wondershare TunesGo (Mac) . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad aragto oo nuqul ka iPhone Camera Roll si Mac aragga oo si fudud. Kaliya 3 tallaabo, aad arki doonaa in aad wareejin photos ee iPhone Camera Roll si Mac.
Tallaabada 1. Download iPhone Roll Camera si Mac qalab kala iibsiga
Download ku TunesGo (Mac) file rakibo barnaamij oo ku xidh aad Mac. Waxaa si fiican u shaqeeyaa MacBook Aird / MacBook Pro / iMac socda ee Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10,10 iyo 10.11. Wondershare TunesGo version Windows waa la heli karo iyo sidoo kale. Waxaad isku dayi kartaa version Windows ku saabsan Windows PC.
Tallaabada 2. Connect Mac la iPhone
Isticmaal cable USB iPhone in ay ku xidhmaan Mac la iPhone. Daah-TunesGo (Mac) qalab oo isla markiiba aragtid doonaa iPhone. Si aad u ogaatid info badan oo ku saabsan taageeray iPhone, fadlan riix halkan .
Tallaabada 3. Transfer Roll Camera iPhone si Mac in Dufcaddii
Guji "Sawirro" dhinaca bidix ee suuqa ugu weyn. Markaas uu furmo suuqa cusub, aad arki doonaa in dhammaan sawiro iyo videos in Roll Camera halkan ku sugan yihiin. Dooro sawiro iyo videos doonayay in Dufcaddii oo guji "Dhoofinta" on sare ee daaqadda. In sanduuqa wadahadal dabamariyay kor, dhigay meel on your computer Mac ah si loo badbaadiyo, kuwaas oo sawiro iyo videos aad wareejinta ka iPhone Camera Roll si Mac.
Geeddi-socodka wareejinta iPhone Camera Roll si Mac oo dhan waa in la dhammeeyo labaad. Oo taas dabadeedna waxaad ka heli doontaa, kuwaas oo videos iyo sawiro ka iPhone Camera Roll aad Mac. Later, waad kala qaybsan kartaan sawiro internetka gaarka ah ama dhiso bogagga sawir. Maxaa la yaab leh oo ku saabsan Wondershare TunesGo (Mac) waa in ay awood inaad sidoo wareejiyo music iyo videos ka iPhone si Mac. Iyada oo ay taasi app iPhone anfacaya, waxaad qaadan doontaa si buuxda gacanta aad iPhone ku haboon gudbiyo.
Isku day Wondershare TunesGo (Mac) haatan si ay u gudbiyaan iPhone Camera Roll si Mac!
Daawo Video ah si ay u gudbiyaan Photos ka iPhone Camera Roll si Mac ah